Anotherverse – Get scienced!!!
(Disclaimer: Above statements are very simplified and there arealot of things that are not known yet. These are answers to my parents or my overly curious cousins if they ask me what I am doing inagradschool)
मंगलबार आँफैमा एउटा लामो र बोरिङ्ग दिन हो। ४ घण्टा लगातार पढाउन पर्ने, सक्किन नपाई फेरी १ घण्टा मिटिङ र तेस पछी ल्याबमा काम। तर आफुलाई पढाउन रमाइलो लाग्ने भएर हो कि खासै झ्याउ लाग्दैन। आज क्लासमा एउटा विद्यार्थीले “रक्सी कसरी बन्छ” भनेर सोध्यो, उनीहरुले काम गरी राखेको असाइन्मेन्टमा रिलेटेड भएको ले। आफ्नो बानी उस्तै छ, उस्को प्रश्न लाई फेरी प्रश्नले नै उत्तर दिए, सोधे
“हामी सास किन फेर्छौ?”
उस्ले वाल्ल परेर मलाई हेर्यो!
र शायद यो पढ्ने सबैले पनि तेही सोच्दै हुनुन्छ होला।
तर त्यो कुरा साधारण हिसाबमा बुझाउन मैले रेस्पिरेसनको कुरा सँग जोड्न पर्ने थ्यो।
हाम्ले सास किन फेर्छौ?
मैले फेरी सोधे।
“बाँच्नको लागि” भनी एउटा विद्यार्थीको उत्तर आयो।
अ! तर किन? मैले फेरी सोधे
उ वाल्ल परेर मलाई हेरी राख्यो, कस्तो उट्पट्याङ प्रश्न सोधेको होला भन्दै। मैले फेरी तेही प्रश्न सोधे। मलाई चाँही पढाउनको लागि पढाउन भन्दा नि सिकाउनको लागि पढाउन मन लाग्छ। केही जानुन अरुले भन्ने कुरा सधैं दिमागमा हुन्छ र त्यसरी प्रेस गरिराखे।
कुरा घुमाएर, हामीले खान्छउ किन भनेर सोधे।
“त्यो नि बाँच्नको लागि भनेर उत्तर आयो”
तर किन?? मेरो फेरी अर्को प्रश्न गयो।
र एती बेला दिमाग मा यो ब्लग लेख्ने आइडिआ आयो। बच्चैमा पढेको कत्ती साधारण कुरा नि खासमा हो चाँही के भन्ने बुझिएको नहुने रहेछ।
किन फेर्छौ त हामी सास? वा किन खान्छम हाम्ले? यि दुइटा कुरा नगर्ना ले हामी “मरिन्छ” भन्छौ। तर किन?
सास फेर्ने क्रमलाई रेस्पिरेसन भनिन्छ। र यो गर्दा हाम्ले अक्सिजन लिएर कार्बोन्डाइअक्साइड फाल्छम। ओक्सिजन लिनुको अर्थ के छ त? वा यो सँग खानुको सम्बन्ध के छ?
सुरु गरम अक्सिजन बाट। हामीले सास फेर्दा अक्सिजन लिन्छम। त्यो अक्सिजन हाम्रो फोक्सोमा जान्छ। फोक्सो बाट तेस्लाई हिमोग्लोबिनले कोषहरु मा लग्छन। हिमोग्लोबिन एउटा प्रोटिनहो जस्मा, हिमोग्लोबिन (Heme + Globin) ४ वटा हिम ग्रुप भएको ग्लोबुलर प्रोटिन हो। जस्को हरेक हिम ग्रुपमा एउटा आइरन याटम हुन्छ। तेही आइरन याटम मा अक्सिजन बाधिएर बस्छन। हिमोग्लोबिनको अक्सिजन प्रतीको आकर्षण राम्रो हुन्छ र, धेरै अक्सिजन भएको ठाउँमा मज्जाले बाधिएर बस्छ भने, अक्सिजन कम वा कर्बोन्डाइअक्साइड धेरै, अथवा एसिडिक कन्डिसनमा उस्ले सजिलै अक्सिजन गुमाउछ। हिमोग्लोबिनको एही गुणहरूले उस्लाई अक्सिअन ओसार पोसार गर्न धेरै मद्धत गर्छ। किन भने हाम्रो फोक्सोमा अक्सिजन धेरै हुन्छ, र कार्बोनडाइअक्साइड त्यो भन्दा काम। र जब हिमोग्लोबिनले अक्सिजन लिएर कोषमा जान्छ, त्यहा सेलुलर रेस्पिरेसनको कारण कर्बोन्डाइअक्साइडको मात्र बढेको हुन्छ र कोषमा पुग्न नपाई हिमोग्लोबिन बाट अक्सिजन झर्न थालछन, र त्यो अक्सिजनको ठाउँ कर्बोन्डाइअक्साइडले लिन्छ।
एउटा बसले बसस्टप बाट यात्राु उठाएर अर्को स्टपमा छोडेको जस्तै हो, मात्र नेपाल यातायातले झै यात्राु नकोची, जम्मा ४ वटा यात्राु बोकेर हिड्छ।
अब जाउ कोषमा के हुँदै छ भन्ने कुरामा, तेस्को लागि हाम्ले किन खान्छउ को प्रश्नमा जान जरुरत छ।
नखाए मरिन्छ भन्दै हामी खान्छम, खान मन नलागे नि भोक लाग्न थाले पछी खानै पर्‍यो। तर त्यो खाएर हुन्छ के?
हामीले खाएको सबै कुराको पाचन हाम्रो मुख बाटै सुरु हुन थालछ। दातले टोकेर हामी पहिले त्यो खाने कुरा सानो पार्छौ, र सोही समयमा सलाइभा वा र्यालले तेस माथि काम गर्न थालछ। र निलिसकेर पेटमा पुग्दा तेस माथि पाचनप्रणालीका बिभिन्न इन्जाइमहरुले टुक्राएर सामान्य अणु बनाउने काम गर्छन्। सबै इन्जाइमले काम गरेर सके पछी, सबै भन्दा सामान्य अनु बन्ने भनेको ग्लुकोज हो। र त्यो ग्लुकोज रगत बाट अक्सिजन झै कोषमा जान्छन। कोषमा ति ग्लुकोज जम्मा भएर बस्छन, र जब हाम्रो हिमोग्लोबिनले अक्सिजन लेर कोषमा छोड्छ, अक्सिजन र ग्लुकोजको रियाक्सन/मिलनमा उर्जा र कार्बोनडाइअक्साइड निस्किन्छ। र त्यो उर्जाले हाम्रो सम्पूर्ण जीवन प्रक्रिया चल्छ। त्यस रियाक्सनको बाइप्रोडक्ट कार्बन्डाइअक्साइड भने हिमोग्लोबिनमा मिसिएर फोक्सो को यात्रामा निस्किन्छ।
अब कुरा गरम रेस्पिरेसन सँग जोडीएका केही रोचक कुराहरुको।
पहिलो कुरा गरम, लेक लाग्ने। आफु धेरै ट्रेक्किङ गर्न रमाउने भएर होला, मलाई यो टपिक पढाउन धेरै रमाइलो लाग्थ्यो। माथि हामीले कुरा गर्‍योउ हिमोग्लोबिनले कसरी काम गर्छ र अस्क्सिजनले के गर्छ भन्ने। अब सोचम, राम गोसाइकुन्ड ट्रेक्किङ जादै छ, उ बिहान धुन्चे बाट खाजा खाएर निस्क्यो। धुन्चे करीब १९०० मिटरमा छ , जहाँ अक्सिजनको मात्र मध्यम हुन्छ। जब उ बिस्तारै देउराली को डाडा चाडन थालाछ, उस्को सेलुलर मेटाबोलिजम हाइ हुँदै जान्छ र, कोषमा उर्जा उत्पतीको लागी धेरै ग्लुकोज बढ्दै जान्छ। जस्ले गर्दा कोषमा कार्बोन्डाइअक्साइडको मात्र बढेको हुन्छ। उ अझै हिड्दै छ, धिम्साको डाडा पुग्दा सम्म उस्ले धेरै हिडी सकेको छ, र उस्को कोषमा भएको अक्सिजन धेरै बली (Burn) सकेको छ। हाम्रो कोषमा ग्लुकोज कती हुन्छ भन्ने हाम्ले कती खायोउ मा भर पर्छ। तर खाएको सबै ग्लुकोज कोषमा ग्लुकोज मात्र भएर बसेको हुन्न। त्यो हुने हो भने हाम्रो ग्लुकोज र उर्जा चाडै सकिन्थ्यो। ग्लुकोज को पोलिमर ग्लाइकोजेन लिवर मा बन्छ र मांसपेशीमा जम्मा भएर बस्छन। र जब एस्तो उच्च तीव्रताको काम भैरहेको हुन्छ तब कोषको ग्लुकोज सकिदै जान्छ, र शरीरले उर्जाको लागि ति मांसपेशीमा भएको ग्लाइकोजेनलाई जलाएर उर्जा निकाल्छ। एस्लाई भनिन्छ एनएरोबीक रेस्पिरेसन। सामान्यतया गरिने रेस्पिरेसन जुनमा अक्सिजन संलग्न भएको हुन्छ तेस्लाई भने एरोबिक रेस्पिरेसन भनिन्छ। तर, एनएरोबिक रेस्पिरेसनको क्रममा भने उर्जा र कार्बोन्डाइअक्साइड नभएर ल्याक्टिक एसिड र उर्जा निस्किन्छ। र जब राम ५ ६ घण्टा लगातार हिंडेर चन्दनबारी पुग्छ, तब सम्म उस्को रेगुलर ग्लुकोज सक्केर ग्लाइकोजेन बर्न भै सकेको हुन सक्छ। कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त एदी त्यस्तो भएको छ कि छैन? एही भएको छ भने, रामको पिंडौला भात्भती पोल्न थालछ। किन? किन भने एनअेरोबिक रेस्पिरेसनले ग्लुकोज बालेर ल्याक्टेट निकाल्छ र त्यो ल्याक्टिक एसिड भएर बस्छ।
र भात्भती पोल्छ। अब सम्झिनु होस्, जिममा होस् या कतै दौडिदा पिंडौला पोलेको थ्यो होला? किन पोल्यो बुझ्नु भयो नि अब?
अब हेरम राम कता पुग्यो।
पिंडौला पोलेको भएर रामले चन्दनबारी नै बस्ने निर्णय गरेछ। भोली पल्ट बिहानै ब्रेक्फास्ट गरेर उ गोसाइकुन्ड तिर हिड्यो, तन्नै ब्रेक्फास्ट गरेकोले आज उ मज्जाले हिद्दै छ। तर जब उ लौरिबिनाको डाडा पुग्यो, त्यो बेला सम्म उस्को शरीरले धेरै उर्जा उत्पादन गरी सकेको हुन्छ र, एसिडीक कन्डिसन बध्दै जान्छ, किन भने सेलुलर रेस्पिरेसन को क्रममा कार्बोन्डाइअक्साइड निस्किन्छ। र फेरी एक चोटि सम्झिउ, हिमोग्लोबिनको अक्सिजन प्रतीको आकर्षण एसिडिक कन्डिसनमा कम हुन्छ, एउटा त्यो काम हुँदै गरेको हुन्छ भने, अर्को वायुमण्डलमा नै अक्सिजनको मात्र कम छ। तेस माथि अब उ लौरिबिनाको डाडामा हिद्दै गर्दा उस्को पिंडौलामा फेरी ल्याक्टिक एसिड जम्मा हुन थाली सक्यो, किन? किन भने उसले बिहान खाएको कुराले दिने उर्जा लौरिबिना सम्म पुग्दा नै प्रयोग भै सक्यो। र अक्सिजन को मात्र काम हुँदै गएको ले उस्लाई गार्हो नि हुँदै गएको छ, टाउको दुख्न थालएको छ, गलेको महसुस भएकोछ। शायद उ आज तेतै तिर बास बस्छ। नबसे के हुन्छ? भन्न होला। के हुन्छ त्यो बारे नि एस्सो छलफल गरम।
जब अक्सिजनको मात्रा कम हुँदै जान्छ तब फोक्सोको रक्त वाहिनी कसिदै जान्छ र फोक्सो पानीले भरिएर मर्न सक्ने खत्रा हुन्छ। एस्लाई High Altitude Pulmonary Edema (Hape) भनिन्छ. र यो कुनै लक्षणहरू नली नै आउन सक्क्छ। गलेको र थाकेको महसुस हुँदै गर्दा भित्र भित्रै यो भैरहेको हुन सक्क्छ। तेसैले लेकमा हिद्दा धेरै होस् पुराउन पर्ने हुन्छ। Hape को उपचार नगरेको खन्डमा यो दिमाग सम्म पुग्न सक्छ र एस्लाई High Altitude Cerebral Edema भनिन्छ र , यो घातक हुन सक्छ ।
अब फर्किउ मेरो विद्यार्थीले सोधेको प्रश्नमा:
रक्सी कसरी भन्छ? र किन चिनी वा गुल्यो हुने सबै कुरा बाट रक्सी बनाउन मिल्छ?
रक्सी फर्मेन्टेसन भन्ने प्रकृया बाट बन्छ। रक्सी बनाउनलाई यिस्ट (मर्चा)को प्रयोग गरिन्छ। यिस्टले अक्सिजनको कमीमा, जस्लाई एनएरोबिक रेस्पिरेसन भनिन्छ, ग्लुकोजलाई बर्न गरेर रक्सी बनाउछ। जसरी हाम्रो मा उर्जा र कार्बोन्डाइ अक्साइड बाइप्रोडक्ट हुन्थ्यो इस्टले रक्सी बनाउछ र त्यो रक्सीलाई प्रोसेसिङ गरेर खान मिल्ने रक्सी बनाइन्छ।
एती कुरा बुझाउने क्रममा मैले सबै रेस्पिरेसनको कुरा कुरा उस्लाई भने, शायद जरी थिएन होला, इस्टले यसरी बनाउछ भनेको भए हुन्थ्यो, तर यो कुरा थपेको ले शायद उस्लाई बुझ्न सजिलो भयो होला। तेसैले यो ब्लगमा नि तेही बुझाउने हिसाबले लेख्न प्रयास गरेको छु, शायद बुझिन्छ होला।